Guggulsterones (guggul) miisaan lumis iyo jidh-dhiska AASraw
/blog/Guggulsterones/Guggulsterones (guggul) oo ah miisaan lumis iyo jir-dhis
Posted on 06 / 22 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Guggulsterones.
Wax kasta oo ku saabsan budada Fosaprepitant Dimeglumine
1.Waa maxay Guggulsterones (guggul)?
2.Guggulsterones (guggul) magaca
3. Guggulsterones (guggul) macluumaadka kiimikada
4.Waa meesha Guggulsterone (guggul) ka timaadaa?
5. Sidee Guggulsterone u shaqeyneysaa?
6.Guggulsterones (guggul) oo lumay miisaanka
7. Guggulsterones (guggul) loogu talagalay jirka dhismaha
8.Guggulsterones (guggul) saameyn ku yeeshay thyroid iyo hoormoonka
9. Qiyaasta guggulsterones qiyaasta / guggul qiyaasta
Digniinta 10.Guggulsterones (guggul)
11. Guggulsterones (guggul) isdhexgalka
12. Ammaan ma u tahay isticmaalka daawada Ayurvedic (Guggulsterones)
13. Guggulsterones (guggul) waxyeello soo gaartay
Dib u eegista 14.Guggulsterones (guggul)
Iib budada Guggulsterone Calaamadaha aasaasiga ah:
1. Waa maxay Guggulsterones (guggul)?
Guggulsterones (guggul), CAS. 95975-55-6, waxaa laga sameeyey soodhada (cirridka xayawaanka) ee dhirta xayawaanka ah ee ku yaala, kaas oo ah hooyo Hindiya. Geedkan waxaa loo isticmaalay daawada Ayurvedic qarniyo badan, iyo qoraallada Ayurvedik oo la xiriirta 600 BC waxay ku talinayaan daaweynta xanuunka atherosclerosis.
Maanta waxaa loo isticmaalaa xanuunka loo yaqaan 'arthritis-ka', oo hoos u dhigaya kolestaroolka sare, adkaynta xididdada "atherosclerosis", finanka iyo cudurada kale ee maqaarka, iyo miisaan lumis.
2. Guggulsterones (guggul) magac
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Guryaha, Gomme Commiphora, Gomme Guggul, Gomme-Résine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone, Guggulstérone, Guggulsterones, Guggulstérones, Guglipid, Gugulipid, Gum Guggal, Gum Guggulu, Indian Bdellium, Indian Bdellium-Tree , Koushika, Mukul Myrrh Tree, Palankasha, Yogaraj Guggul Gum Resin
Guggulsterone (guggul) macluumaadka kiimikada
magaca Guggulsterone, guggul, Ayurvedic
Formula kelli C21H28O2
Miisaanka kelli 312.45
saxid kaydinta 2-8 ° C
Color budo huruud Light
dheer Payment WU, MG, BT, T / T
4. Halkee ayuu ka yimaadaa Guggulsterone (guggul)?
Guggulsterone (guggul) ayaa markii hore la helay oo lagu hirgeliyey daawo dhireed boqolaal sano ka hor waddankoodii hooyo ee Hindiya. Sida daawada dabiiciga ah ee dabiiciga ah, dheecaanka guggul laga soo gooyay geedka malmaliga ayaa markii hore la rumeeysan yahay in uu gacan ka geysto hagaajinta wax soo saarida iyo dheecaanka, iyada oo loo eego saameynta loogu talagalay hoos u dhigidda kolestaroolka LDL gudaha dhiigga. Daraasadihii isdaba-joogga ahaa waxay soo tebiyeen in qaar ka mid ah sheegashooyinkaasi ay yihiin kuwo aan sax ahayn, iyo in guggulsterones ay wax u dhimeyso heerarka kolestaroolka, wax kastoo cilmi-baaris ku socdo waa la damaanad qaaday.
Ku soo koray Hindiya, Guggul waa geed ka soo bixiya dheecaan xasaasi ah meelaha la jeexay ee lagu sameeyay jilifkiisa. Dheecaankan waxaa loo isticmaali jiray qarniyo badan inuu ka mid noqdo daawooyinka soo jireenka ah ee Hindiya loo yaqaan Ayurveda. Adduunkeenna casriga ah ee kimistariga horumarsan, dheecaankan foosha badan ayaa la farsameeyaa oo la sifeeyaa, ka dibna loo jaangooyaa qaddar la siiyay oo ka mid ah xubnaheeda firfircoon-Z iyo E Guggulsterones (guggulsterones dr oz). Labadan xeryood waa sterol-yada dhirta oo leh heer sare oo firfircoonaanta aadanaha waxaana lagu muujiyey daraasado saameynaya habab badan oo bayooloji ah oo ay kujiraan dheef-shiid kiimikaad, maaraynta kolestaroolka, iyo shaqada maqaarka. Mid kasta oo ka mid ah aagaggan, Guggulsterones waxaa lagu muujiyey daraasado si ay u noqdaan kuwo wax-qabad aad u wax ku ool ah oo leh awood u dhow daroogada.
Guggul (ama gugulipid) waa geedo dhaqameed Ayurvedic ah oo loo isticmaalo in lagu taageero heerarka kolestaroolka caafimaadka leh ee horeyba ugu jiray heerka caadiga ah. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa maareynta miisaanka. Sidee ayuu u shaqeeyaa Guggulsterone?
Guggul wuxuu ka kooban yahay walxaha hoos u dhigaya kolesteroolka iyo triglycerides. Mid ka mid ah walxahan waxay sidoo kale hoos u dhigtaa guduudka iyo bararka ku dhaca noocyada finanka.
6. Guggulsterones (guggul) oo miisaan lumis ah
Guggulsterones waa qayb firfircoon oo ka mid ah Aryuvedic geedaha Commiphora mukul, oo sidoo kale loo yaqaan gugulipids. Daraasado dhowr ah oo cusub ayaa soo jeedinaya in guggulsterones ay waxtar u leeyihiin miisaanka oo yaraada.
In jiirka tijaabada xayawaanka lagu quudin jiray cunno dufan badan 16 toddobaad. Sidii la filayay, jiirku wuxuu soo saaray kororka gulukooska dhiigga, kolestaroolka iyo heerarka triglyceride oo ay weheliyaan kororka caabbinta insulin-ta si weyn, marka loo barbardhigo xakameynta xayawaanka. Jiirka ayaa quudiyay guggulsterones oo ay weheliso cuntada dufanka badan waxay muujiyeen inay si weyn u wanaajiyeen sonkorta dhiigga iyo dheef-shiid kiimikaadka gubanaya. Intaa waxaa sii dheer, guggulsterones waxay si toos ah ula falgaleen unugyada dufanka ilmaha, iyaga oo ka horjoogsanaya inay noqdaan unugyo keydinta dufanka bisil. Baarayaasha ayaa intaas ku soo gabagabeeyay
"Guggulsterone wuxuu leeyahay saameyn hypoglycemic iyo hypolipidemic labadaba oo kaa caawin kara daaweynta cudurka macaanka ee nooca II."
Daraasad kale oo unug ah ayaa xaqiijisay saameynta guggulsterone ee unugyada baruurta1. Waxaa la muujiyay in guggulsterones ay yareeyeen tirada unugyada dufanka bisil, waxay yareeyeen keydinta dufanka ee unugyada dufanka bislaaday. Natiijooyinkani waxay muujinayaan in guggulsterones ay yihiin dhiirrigeliyeyaasha firfircoon ee gubashada dufanka, ka ilaaliya isku duubnaanta dufanka.
7. Guggulsterones (guggul) oo loogu talagalay jir dhiska
Bodybuilding, ahaanshaha isboorti qurxinta, kaliya kama walwalsan tahay dhismaha unugyada muruqyada adag laakiin sidoo kale waxay yareyneysaa xaddiga dhigaalka dufanka. Dhismaha jirka ee 'Guggulsterones', Waxaad miisaami kartaa 240 rodol waxaadna lahaan kartaa qaddar badan oo ah koritaanka murqaha laakiin haddii aad leedahay laba inji oo dufan subagga hoostiisa ku jira oo dhan jirkaaga uma muuqan doontid wax weyn. Xaqiiqdii kamaheli doontid qurxin qurux badan dadka qaarna xitaa waxay kuugu yeeri karaan Doughboy. Hagaag, hadaad tahay wax lamid ah geedka Guggul ma jeclaan doontid in loogu yeero magacyo markaa waxaad si adag ugu shaqeyn doontaa sida ugufiican ee aad ufiiriso. Nasiib wanaag, marka laga hadlayo dufanka lumay, Guggul wuu fahamsan yahay dhibaatadaada wuxuuna halkaas u joogaa inuu kaa caawiyo inaad la kulanto yoolalkaaga (guggulsterones bodybuilding).
Marka qanjidhada thyroid-ka la kiciyo, waxay soo saartaa hoormoonka tayroodhka sida tayriska. Hormoodyadan tayroodhka ah waxay leeyihiin saameyn qoto dheer oo ku saabsan xaddiga dheef-shiid kiimikaadka oo ay ka mid yihiin saameyn toos ah oo saameyn ku leh unugyada adipose. Dhab ahaan, tani waxay ka dhigan tahay in Guggulsterones ay kicin doonto qanjirkaaga si aad u soo saarto hormoono badan oo tayroodh ah kaas oo markaa kicin doona heerka cabbirka dheef-shiid kiimikaadana gubi dufan badan! Guggulsterones naftooda ayaa loo muujiyay in ay si fiican u shaqeeyaan fatuurada laakiin waxaan helay isku-dhaf ah oo aan waxba ka gaaban-Guggulsterones iyo ECA sida sida haatan Adipokinetix joojiyey. Waxaan horayba u ognahay in Adipokinetix uu yahay gubi aad u xoog badan, laakiin wuxuu ka shaqeeyaa meel ka baxsan dhulka daciifka.
Waxay iigu macnaysay in haddii qofku uu isku dari karo saamaynta gubitaanka ee hoormoonka tayroodhka ee hoormoonka tayroodhka ee hoormoonka adrenergic (tusaale, adrenaline) wax aad u dhicin. Sidoo kale, xiiso waa xaqiiqda ah in noocyada ECA noociisa ay u muuqdaan in ay yareeyaan qiyaasta hoormoonka tayroodhka ku wareega dhiigga waqti ka dib. Guggulsterones waxay sameeyaan shaqo weyn oo la xakameynayo hoos u dhigiddan, sidaas oo ay ku ilaalinayaan dhammaan hababka gubashada dufanka jirka ee ku shaqeeya heerka ugu sarreeya.
Siyaabaha ugu dambeeya ee Guggulsterones uga faa'iideysan karaan dagaalka loogu jiro gubida dufanka waxay ku jirtaa cuntooyinka ketogenic iyo isticmaalka hoormoonka koritaanka. Waqti ka dib, cuntooyinka ketogenic waxay u muuqdaan inay yareynayaan waxtarka qanjirka 'thyroid' iyagoo yareynaya u beddelashada T4 illaa T3 awood badan. Sidoo kale, halka Guggulsterones maalin kasta la qaadan jiray bilaha 3, waxay soo saareen hoos u dhac ku yimaada dhaawacyada inta badan bukaannada. Iyada oo loo yaqaan 'tetracycline', hoos u dhaca boqolkiiba ee dhaawacyada caabuqa ayaa ahaa 65.2% marka loo barbardhigo 68% ee Guggulsterones. Sidaad u aragto, saaxiibkeen Guggul wuxuu aad ugu awood badan yahay la dagaallanka finanka (guggulsterones acne)
8. Saamaynta Guggulsterones (guggul) ee tayroodhka iyo hoormoonka
Guggulsterones (guggul) waa koox gaar ah oo lagu barto waxyeelada duxda badan ee dufanka leh ee sanadaha. * Si ka duwan kuwa kale ee guban kara, oo ka shaqeynaya kor u qaadista wadnaha ama kor u qaada jidhka caadiga ah ee jirka ee dufanka iyo sonkorta, guggul Soo bixinta (iyo walxaha firfircoon, guggulsterones) ayaa la sheegay in ay saameyn ku yeelaneyso tayroodhka iyo soosaarka hoormoonka ee la xidhiidha dheef-shiid kiimikaad (qanjidhada thyroid).
Maxay dad badan oo xiiseynaya Guggulsterones (guggul) waa suurtogalnimada habka miisaanka lumay, uuna ku shaqeynayo qanjirada si loo abuuro dheelitirka hormoonka triiodotyronin (T3) iyo thyroxine (T4) oo xukuma dheef-shiid kiimikaad (guggulsterones thyroid). Daraasad caadi ah oo lagu sameeyay jaamacadda Devi Ahilya ee Hindiya, ayaa cilmi baarayaashu waxa ay kor u qaadeen xoojinta T3 mawduucyada xayawaanka ah ee lagu soo saarey geedka guggul T4 heerarka isma bedelin. Tani waxay soo jeedinaysaa in codsiga bini'aadamka ee arrintan ay soo saari karto natiijooyin isku mid ah oo ku lug leh cunto habboon iyo jimicsi, gaar ahaan shakhsiyaadka ku haya iskudhaca tirakoobka sida sida "hypothyroidism". Daraasad bini'aadin ah oo lagu sameeyay 1995 58 oo ay la socdeen 4.95 shaqsiyaadka culeyska culus ayaa u muuqda inay xaqiijinayaan natiijooyinkan, iyadoo celcelis ahaan lumay miisaanka 30 lagu arkey shakhsiyaad lagu maamulay maaddooyinka muddada 6 marka la barbardhigo kooxda xakameynayaXNUMX.
Muhiimad ahaan, saameynahan waxaa lagu gaari karaa iyada oo aan la kicin habka habka dhexe ee dareenka, sida guggulsterones si adag u dhaqmeysa qanjirka. * Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay shakhsiyaadka laga yaabo inay qabaan xaaladaha wadnaha ee nooc kasta, ama shakhsiyaadka raadinaya gargaar dheeraad ah oo lagu lumiyo miisaan la'aan iyadoon loo baahnayn jasiiradaha iyo shilalka kuwaas oo inta badan la socda isticmaalka badan oo ah CNS-kiciyeyaasha.
9. Qiyaasta Guggulsterones / qiyaasta guggul
Qiyaasta caadiga ah ee qiyaasta guggul / gugul (xayawaanka) waa 400-500mg maalin walba la qaato cuntooyin, oo isu-geynaya 1,200-1,500mg maalin kasta (inkasta oo qiyaaso ilaa xNUMXmg loo isticmaalay kahor) Haddii loo isticmaalo qiyaasta guggulsterones ee go'doominta, qadar ah 2,000mg qaadashada saddex jeer oo cunto ah ayaa la isticmaalaa.
Mararka qaar 'cirridka guggul' waxaa loo isticmaalaa qaddarro ah 2-4.5ga maalin (wadar ahaan), in kasta oo aysan hubin haddii guggul uu u baahan yahay in lagu cuno cunnooyinka haddana weli waxay u muuqataa in lagu taliyo iyadoo laga fiirsanayo.
10. Digniinta Guggulsterones (guggul)
-Fasulida iyo naas-nuujinta
Guggul waa mid aan caadi aheyn inta lagu guda jiro uurka. Waxay u muuqataa in ay dhiirigeliso socodka caadada waxayna kicisaa ilmo-galeenka, sidaa daraadeed cilmi-baareyaashu waxay ka walwalayaan inay halis u tahay uurka. Looma ogaanin amniga isticmaalka guggul inta lagu jiro naas-nuujinta. Ha isticmaalin qalabka guggooda haddii aad uur leedahay ama naas nuujin.
- Ciladda dhiigga
Guggul waxay hoos u dhigi kartaa xinjirowga dhiigga waxayna keeni kartaa dhiigbax ama nabar ku dhaca dadka qaba xanuunka dhiigbaxa.
Xaalad xasaasiyad leh sida kansarka naasaha, kansarka ilmo-galeenka, kansarka ugxan-sidaha, endometriosis, ama fareebaha uterineine
Guggul waxay u dhaqmi kartaa sida estrogen ee jirka. Haddii aad qabto wax shuruud ah oo laga yaabo inay ka sii xumaato adigoon ku dhicin estrogen, ha isticmaalin guggul.
-Tiro ama tirakoob aad u daran (hypothyroidism ama hyperthyroidism)
Guggul waxay faragalin kartaa daaweynta xaaladahaas. Haddii aad qabtid xaalad tayroodh ah, ha u isticmaalin guggul adiga oo aan la socon kormeerahaaga daryeel caafimaad.
Guggul waxay kordhin kartaa khatarta dhiig-baxa inta lagu jiro iyo ka dib qaliinka. Jooji isticmaalka guggul ugu yaraan toddobaadka toddobaad kahor qalliinka jadwalka ah.
11. Isdhexgalka Guggulsterones (guggul)
- Kiniiniyada xakamaynta (daawooyinka ka hortagga uurka) waxay la falgalaan GUGGUL
Qaar ka mid ah kaniiniyada xakameynta dhalmada waxaa ku jira estrogen. Guggul waxaa laga yaabaa in ay kor u qaadaan saameynta daawooyinka kiniinka ilaalinta dhalmada. Qaar ka mid ah kaniiniyada xakamaynta dhalmada waxaa ka mid ah ethinyl estradiol iyo levonorgestrel (shamilyar), etinyl estradiol iyo norethindrone (Ortho-Novum 1 / 35, Ortho-Novum 7 / 7 / 7), iyo kuwo kale.
-Madaxyada ayaa bedelay beerka (Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) substrates) waxay la xiriiraan GUGGUL
Daawooyinka qaarkood beerka ayaa badala oo jajabiya.Guggul wuxuu kordhin karaa sida ugu dhakhsaha badan ee beerku u burburiyo daawooyinka qaarkood. Qaadashada guggul oo ay weheliso daawooyinka qaarkood ee beerku jajabiyo waxay yareyn kartaa waxtarka daawooyinka qaar. Kahor qaadashada guggul kala hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga haddii aad qaadanayso wax daawo ah oo beerka beddelo.
Daawooyinka qaar ee beerka badalay waxaa kamid ah lovastatin (Mevacor), atorvastatin (Lipitor), ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Sporanox), fexofenadine (Allegra), triazolam (Halcion), iyo kuwa kale oo badan.
-Propranolol (Inderal) waxay la xiriirtaa GUGGUL
Guggul waxay hoos u dhigi kartaa inta badan propranolol (Inderal) jidhku nuugo. Gacmaha oo la socdo propranolol (Inderal) wuxuu yareeyn karaa waxtarnimada propranolol (Inderal).
-Tamoxifen (Nolvadex) waxay la wadaagaan GUGGUL
Noocyada kansarka qaarkood ayaa saameeya hormoonka jidhka. Kansarrada xasaasiyadda dhedhexaadka waa kansarro kuwaas oo ay saameeyaan heerarka estrogen ee jirka. (Nolvadex) ayaa loo isticmaalaa in lagu caawiyo daaweynta iyo ka hortagga noocyada kansarka ah. Guggul wuxuu saameeyn ku yeelan karaa heerarka estrogen ee jirka. Adigoo saameynaya estrogen ee jirka, guggul wuxuu yareeyn karaa waxtarnimada tamoxifen (Nolvadex). Ha qaadan qoryaha haddii aad qaadanayso tamoxifen (Nolvadex).
12. Ma nabad baa in la isticmaalo daawada Ayurvedic (Guggulsterones)
Dhaqanka qadiimka ah ee daawada Ayurvedic (Guggulsterones) ayaa si cad u caawisay malaayiin qof oo abuura nolol caafimaad leh. Si kastaba ha noqotee, sida nidaamyada kale ee daaweynta, daaweynta Ayurvedic waxay leedahay khilaafyo iyo suurta galnimada waxyeellooyinka xun ama saameynaha.
Qaar badan oo Ayurvedic ah ayaa ku doodaya in mudada dheer ee nidaamka nidaamku uu soo bandhigo dood xoog badan oo ku saabsan guusha iyo ammaanka. Si kastaba ha noqotee, inta badan macluumaadka ku saabsan saamaynta Ayurveda ayaa macalinka u gudbiyay ardayga. Marka lagu daro "taariikhda afka," buugaagta qadiimiga ah ee Charak Samhita iyo Sushruta Samhita waxay ku jiraan dukumiintiyo aragti ah oo ku saabsan waxtarka nidaamka.
Inkastoo aysan jirin baaritaan caafimaad oo badan oo ku saabsan Ayurveda, mabaadii'da nidaamyada iyo dhaqanka nidaamyada hadda ayaa la aqoonsan yahay waxaana loo isticmaalaa goobaha caafimaadka caadiga ah. Tusaale ahaan, kiraystaha Ayurvedik ee maskaxda iyo saameynta jidhka ayaa khibrad u yeeshay bani'aadamka intii lagu jiray isbeddelka xilli-hoosaadka waxaa lagu soo saarey cilmi-baadhis ku saabsan SAD (xannuun xilliyeed xilliyeedka).
Waxaa sidoo kale jira daaweyn iyo farsamoyaqaan caddaynaya faa'iidooyinka caafimaadka ee hababka Ayurvediga, sida yoga, masaajeynta, iyo fikirka. Dhir daaweedka loo isticmaalo daawada Ayurvedic, sida qoryaha, sinjiga, iyo neem, ayaa hadda loo aqoonsan yahay inay faa'iido u leeyihiin caafimaadka wadnaha iyo sida antioxidant-kiciyeyaasha. Eeg tixraacyada iyo qaybta kale ee akhrinta ee hoose ee tusaalooyinka daraasado cilmi baaris ah oo bilaabanaya in ay ka soo baxaan isticmaalka dhirta qaas ah ee Ayurvedik ah.
Aqoonta reer galbeedka ee dawada Ayurvedic (Guggulsterones) wali waa mid bilow ah, sidaas darteed shaki ayaa jira. Maaddaama isticmaalka dawada Ayurvedic ay sii kordheyso, iyo in xirfadlayaal badani ay la wadaagaan aqoontooda bixiyeyaasha kale ee daryeelka caafimaadka, taxaddarnaanta Ayurveda waxay u beddeli kartaa qadarin iyo aqoonta nidaamka.
13. Guggulsterones (guggul) waxyeelo
Roodhyo huruud ah oo laga soo saaray geedka guggul wuxuu ka kooban yahay walxo la yiraahdo guggulsterones iyo suurto galka kale. Daraasada shaybaarka ah waxay ogaadeen in guggulsterones ay bedeli karaan dheef-shiid kiimikaad ee kolestaroolka beerka. Guggulsterones ayaa sidoo kale kordhin kara wax soo saarka hoormoonka tayroodhka waxaana badanaa lagu daraa miisaanka luminta khasaaraha ee ujeedadaas. Waxyaabaha ku jira xayawaanka cagaaran waa in lala socdaa taxaddar sababta oo ah khatarta ay leedahay dhibaatooyinka soo raaca.
-Sawirada Sidee Laga Helaa
14. Dib u eegista Guggulsterones (guggul)
Guggulsterones (guggul) waa xeryaha dufcadda (alkaloids) laga helo Commiphora Mukul. Guggul waxaa loo isticmaali jiray daawooyinka Hindiya Ayurvedik in ka badan sanadihii 2,000 ee cudurro kala duwan oo soo dhaweynaya daawada reer galbeedka ee loo yaqaan 'cholesterol-hoos u dhac', dermogramical, anti-inflammatory, anti-arthritic iyo faa'iidooyinka ka hortagga cayilka.
Tags: iibso budada Guggulsterones, Budada Guggulsterones
Waxyaabaha 9 ee ku saabsan hannaanka Entecavir Sida Loo Iibsado Daawada Nifuratel (4936-47-4) talaabo talaabo onlayn ah